Shirka Magalada Baladweyne oo ku socda si habsami iyo qorshahii loogu tala galay | cowslafil news network
Posted by cowslafil On July 24, 2015 1 Comment
Nabadoon islow khaasim cusmaan oo la hadlay warbaahinta Danan ee magaalada muqdisho ahna nabadoonada kasoo jeeda gobolka hiiraan ayaa waxa uu ka xog waramaya shirka ka soconayo magaalada baladweyne waxa uuna sheegay in uu socda shirka uuna ka socdo galbeedka magaalada baladweyne, ayna sida tooska ay ugu arin sanayaan ilaa iyo sedex iyo toban beelood oo wada daga gobolka hiiraan.
Si kastaba shirkani ka soconayo magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ah mid ay kaga arinsanayaan beelaha dega gobolkaasi sidii loo soo dhisi lahaa maamul ay ku mideysan yihiin gobolada hiiraan iyo shabeelaha dhexe.
Previous:Ugaaska beesha Biimaal oo martiqaad hoygiisa ugu sameeyay salaadiin ka soo jeeda beelaha Direed
Next: Daawo Sawirada Booqashadii C/hi Waafow uu ku tagay Difaacyada Hore.
4:57 pm July 25, 2015
masha allah wa guul iyo wax lagu farxa gobalka hiiraan horumarkiisa wa in an kawada shaqeyna inta bel e dagan marlabaad. waxana ugu hambalyeyna mamulka westland state iyo cidanka iyo maxad weyne cawale isaaq jaraay sida wacan ay gogasha ugu dhigeen walalaha kale iyo sida ay amanka iyo nabad galyada shirka usugayaan guul shirka labaadna in sha allah waxa kagu qaban dona dagmada farlibaax